Hogaamiyaha Ahlu Sunna oo faah faahin ka bixiyay wadahadaladda ay la leeyihiin Galmudug |
Hogaamiyaha Ahlu Sunna oo faah faahin ka bixiyay wadahadaladda ay la leeyihiin Galmudug
Kenya (estvlive) 26/11/2017
Hogaamiyaha maamulka Ahlu Sunna Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo asagoo ku sugan Magaalada Nairobi ee Caasimadda Kenya ayaa faah faahin bixiyay Waddahadal ay dhawaan kula yeesheen magaalada Nairobi maamulka Galmudug.
Sheekh Maxamed Shaakir ayaa sheegay in madax ka tirsan urur gobolleedka IGAD ay si goon gooni ah ula kulmeen madax ka socota maamulada Galmudug iyo Ahlu Sunna Islamarkaana dhinac kasta lagala hadlay xal u helida khilaafka u dhaxeeya.
Sheekh Shaakir ayaa sidoo kale sheegay in madaxda Ahlu Sunna ay doonayaan in la mideeyo awoodda Galmudug iyo Ahlu Sunna si meesha looga saaro kala khilaafka taagan.
“Waxaan dooneynaa in la mideeyo Calanka Dastuurka, Baarlamaanka iyo Ciidamada,intaas haddii ay dhacdo waxaa Sahlanaaneysa in laga adkaado Al-shabaab oo laga saaro goobaha ay ka joogaan gobollada dhexe ee bartamaha Soomaaliya”ayuu yiri madaxweyne Shaakir.
Dhawaan ayaa la filayaa in labada dhinac ay kala saxiixdaan heshiis hor dhac u ah soo afjarista khilaafka siyaasadeed ee muddo dheerba u dhaxeeyay labada maamul Ahlu Sunna iyo Galmudug.